CELE WINGAGAR – Page2– Local and Celebrity News
ဟိန်းဝေယံရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးကို ပီတိဖြစ်စွာ ဝေမျှလာတဲ့
ဟိန်းဝေယံကတော့ ဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက် အားပေးချစ်ခင်ခြင်းတွေကိုပါ အခိုင်အမာရရှိထားကာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဒီနေ့ထိ ရပ်တည်နေသူပါ။ ဟိန်းဝေယံက ယောကျ်ားပီသတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ချိုသာပြေပြစ်တဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပါ ။ ဒါ့အပြင် အလှူအတန်းတွေဆိုရင်လည်း တတ်နိုငိသလောက် မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ […]
မေလ (၁၉)ရက်နေ့တွင်အပြီးသတ်အမိန့်ချခံရတော့မယ့်လာမည့်သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်…
လာမည့် မေလ (၁၉)ရက်နေ့တွင်အပြီးသတ်အမိန့်ချခံရတော့မယ့် အတွက် သူ့ကို ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်… ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာတတ်တ​တ်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီး မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရစဥ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးပါလက်ဝယ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်အား စွဲဆိုထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုအတွက် မေ ၁၉ ရက်နေ့တွင်အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ဟု […]
ပရိသတ္ႀကီးေရ Facebook Cele မေလး ပန္ကိတ္ဒါဒါကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီ းၿပီး သားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ပန္ကိတ္ဒါဒါကေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးခ်စ္ခင္မႈေတြကို အျပည့္အဝ ရရွိထားသူ သ ပါ။Relationship တစ္ခုမွာ နာက်င္စရာ အမွတ္တရေတြ ျပည့္ခဲ့ေပ […]
အရမ်းအဆော့သန်တဲ့ သမီးလေး Pilar အတူ ကစားနည်းအသစ်တွေနဲ့ဆော့ကစားပေးနေရတဲ့ ချမ်းချမ်း
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္းကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသာ းျဖစ္မယ္ ထင္ပါ တယ္.။ ခ်မ္းခ်မ္းကေတာ့ အသံပါဝါအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ တစ္ဦးဆိုလည္း မမွားပါဘူးေနာ္.။ လက္ရွိမွာေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းက ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔အတူ အီတလီမွာ အေျခခ် […]
ရှင်ပြုအလှူကြီးပြုလုပ်ပေးပြီး ချစ်ရတဲ့မိခင်ကြီးကွယ်လွန်တာ (၆)လပြည့်သွားတဲ့နေ့လေးမှာ အမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မိုးဟေကိုခ်စ္ရတဲ့မိခင္ႀကီးကြယ္လြန္တာ (၆)လျပည့္သြားတဲ့ေန႕ေလးမွာ ရွင္ျပဳအလႉႀကီးျပဳလုပ္ေပးၿပီး အမွ်ေဝေပးခဲ့တဲ့ မိုးေဟကို
အမိုက္စားေဘာ္ဒီနဲ႔ တစ္ေန႔တျခား ပိုပိုလွလာတဲ့ မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အရမ္းကိုႏုပ်ိဳလွပလြန္းတဲ့ မိုးေဟကို ကေတာ့ ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ေတြေရာ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြပါ အေႂကြႀကီးေႂကြေနၾကတဲ့ မင္းသမီ းေခ်ာေလးပါ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးထက္ သူမကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပိုမိုအားစိုက္ေနတာ ပရိသတ္ေ တြအျမင္ပါပဲ […]
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ နေဒွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ် လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နေဒွေးရဲ့ကောင်မလေး
April 30, 2022 100million 0
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနေဒြးကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကာ းေတြမ်ားစြာမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း ေအာင္ျမ င္လာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ေနေဒြး ေဒ သူ႔ရဲ့ အႏုပညာလ ႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္သာမကပဲ သူ႔ရဲ့ အခ်စ္ ေရ းေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေ ယာက္ျဖစ္ပါ တယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း […]
တစ်ချိန်ကခောတ်ပြိုင်မင်းသားတွေနဲ့ရိုက်ကူးထား တဲ့ ငယ်ဘဝအမှတ် တရပုံရိပ်တွေကိုပြသ လာတဲ့ လူပျိုကြီး ရဝေအောင်
မင္းသားေခ်ာ ရေဝေအာင္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြရဲ့အသည္းေတြကို ကိုင္လႈပ္နိုင္ခဲ့တဲ့ မင္းသားဆိုတာ လူတိုင္းမွတ္မိၾကမွာပါေနာ္.. ရေဝေအာင္ကေတာ့ ျမန္မာဇာတ္လမ္းေတြမွာလည္း က်ရာေန ရာကေန ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးက အားေပးေနၾကတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. မင္းသားေခ်ာ […]
သူမအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်း အမြဲအဆင်သင့်ရှိပေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းနန်းသူဇာရဲ့ ကောင်းကွက်တွေ ကိုပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း…
သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကေတာ့ ဆရာဝန္မ ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ သူဝါသနာပါတဲ့ အႏုပညာအလုပ္ ေတြကိုပဲ လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းက သူမ ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သြား ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စိတ္ေရာလူပါ ပင္ပန္းခဲ့ရၿပီး တစ္ဖက္မွာ လည္း စီးပြားလည္းရွာ ကေလးေတြကို […]
ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေသက်ခိုင်….
ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေသက်ခိုင်…. ပရိသတ်ကြီးရေ မေသက်ခိုင်ကတော့တစ်ခတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို​မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဖူးဖူးလေးကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ် တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေပါသဘောကျအားပေးဝန်းရံခံခဲ့ရသူပါ။ လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ ပေမယ့် သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှ ာဖော်ပြလျက်ရှိတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေထိုင် […]